महान् ग्रह मंगलको राशि परिवर्तन: यी ४ राशिलाई अत्यन्त शुभ ! – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / महान् ग्रह मंगलको राशि परिवर्तन: यी ४ राशिलाई अत्यन्त शुभ !
महान् ग्रह मंगलको राशि परिवर्तन: यी ४ राशिलाई अत्यन्त शुभ !
admin January 7, 2022 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 142 Views
सबै ९ ग्रहहरू निश्चित अन्तरालमा एक राशिबाट अर्को राशिमा सर्छन्। वैदिक ज्योतिषमा यो पारगमनलाई कर्ण गोचर भनिन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा भनिएको छ कि जब कुनै ग्रहको राशि परिवर्तन हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यक्तिको जीवनमा पर्छ। सन् २०२२ मा धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रहहरूले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्नेछन्। ग्रहहरूका सेनापति र भूमि पुत्र भनिने मंगल ग्रहले १६ जनावरी २०२२ मा राशि परिवर्तन गर्नेछ। मंगल ग्रहले आफ्नो वृश्चिक राशिको यात्रा समाप्त गरी धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ। धनु राशिमा मंगल ग्रहको आगमनले धेरैको जीवनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी मंगल कर्कटमा दुर्बल र मकर राशिमा उच्च मानिन्छ।
मेष राशि हुनेहरुका लागि मंगल ग्रहको राशि परिवर्तन निकै शुभ र लाभदायक रहनेछ। मंगल परिवर्तनले यस राशिका व्यक्तिको जीवनमा धन, मान-सम्मान र इज्जतमा वृद्धि हुने संकेत रहेको छ। लगानीमा प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका मिल्नेछ। रोजगारीका लागि उपयुक्त र राम्रो अवसर मिल्नेछ। पदोन्नतिको संकेत देखिन्छ। यो राशि परिवर्तन व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुका लागि लाभदायक रहनेछ।
यस राशिका मानिसहरुका लागि धनु राशिमा मंगलको गोचर कुनै वरदान भन्दा कम हुने छैन। नोकरी तथा व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। मंगलको गोचरले तपाईंको आम्दानीमा वृद्धि हुने संकेत दिइरहेको छ। स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ। तपाईंको धेरै फाइदा हुने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध बढ्नेछ। यस अवधिमा तपाईंले धेरै प्रकारका शुभ समाचारहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
कन्या राशिका लागि मंगल ग्रहको गोचरले शुभ फल दिनेछ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तनको संकेत देखिन्छ। काममा धेरै राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। घरपरिवारको सहयोग मिल्नेछ। व्यापारमा नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ, जसका कारण व्यापारमा नाफा बढ्नेछ। हरेक काममा सफलता मिल्नेछ।
धेरै राम्रो अवसर मिल्नेछ। धेरै दिनदेखि काममा आइरहेका अवरोध हट्नेछन्। कार्यस्थलमा राम्रो र सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। राम्रो कामको अवसर मिल्नेछ। जीवनमा आइरहने समस्याको अन्त्य हुनेछ। जसका कारण तपाईंको मन प्रसन्न रहनेछ।
Previous सं,क्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो ड’रलाग्दो अपडेट
Next यी ६ वस्तुतर्फ भूलेर पनि खुट्टा नतेर्साउनुस्